トップページ ＞ 言語 ＞ マラガシ語 ＞ Ny zava-dehibe, rehefa voafehy ny tanjona latabatra hahita ny slump pachinko kisary ao amin'ny efitrano fandraisam-bahinin'ny
Tantaran'ny pachinko efi-trano, lehibe lamba amin'ny milina antsoina hoe angon-drakitra Lobo, fivarotana izay napetraka lasa maro. Ny tsena aloha ny fanokafana sy ny mifanohitra teo aloha, sns, ao amin'io milina efa nametraka, vao haingana latabatra lalao tsirairay isaky ny tahirin-kevitra, sy ny amin'izao fotoana izao jackpot mety, hatramin'ny namely sy payout tetezamita Tabilao antsoina hoe slump kisary dia afaka mahita ny onja, toy ny isan'ny revolisiona.
koa, tsy misy angon-drakitra Robo pachinko parlors, dia tonga noho ny angon-drakitra mifanohitra isaky ny latabatra.
dia ny hanoherana ny mitovy karazana andraikitra, nefa mitombo izany dia kely ny fanazavana raha ampitahaina amin 'ny angon-drakitra Robo. Izany dia toy izany ny fanazavana be dia angon-drakitra Robo hita, fa ny angon-drakitra tianao fantatra indrindra ao amin'ny tsirairay no maty ary ny payout tetezamita kisary.
tetezamita ny payout Tabilao, ary ny toe-draharaha ny andro iray baolina fiposahan'ny masoandro sy andevozin'ny amin'ny latabatry ny andalana sary, dia inona no mora ny mahita. Payout na tamin 'ny fotoana lehibe ny hira, ny zava-misy sy ny mitohy Chan, azonao atao ny manamarin ny ambaratonga mahadomelina tat? aoriana.
tahaka ny ambony sy ny ambany ny hetsika dia tery sehatra ity andalana Tabilao, baolina avy amin'izao fotoana izao dia milamina, dia ho sarotra ny mikendry hijoro andevozin'ny.
※ Mazava ho azy, misy efa mazava ho azy fa azo atao ihany koa ny vanim-potoana mafy ny Mower Horukon rehefa nipetraka tao amin'ny mijoro ankehitriny izay miovaova.
ny ambony sy ny ambany mpanao an-keriny hijoro sary hetsika ity, ny maha samy hafa mampiankin-doha mafy sy isaky ny, na dia ny andro mialoha ny mahery, rehefa tsy mahafantatra onja miseho tampoka tezitra, no latabatra izay misy loza ateraky ny mahadomelina. Na izany aza, ny jiro toy izany, satria misy ihany koa ny baomba hery, fa ny tafahoatra, dia afaka ihany koa ho ny zava-misy fa ny sehatra izay azo antenaina mba hitsoka teny hafa.
Ary, tiako mba hijery fantsakana hafa koa indray no sehatra mety.
ny pachinko milina dia, fa misy hira mety lehibe, izay maneho ny misaraka izao mety ho ny amin'izao fotoana izao jackpot izany, dia hitsangana mety. Miverena (vondrona isaky ny jackpot mety) imbetsaka, dia ho mpitari-dalana ny zavatra tonga jackpot iray. Amin'ny ankapobeny, io Tai 確 Raha ny tahan'ny dia 180 na latsaka, dia ho ny tanjona mason'ny ny sehatra.
sy ho tonga bebe kokoa noho ny 180, nitombo ihany koa ny fampiasam-bola hatramin'ny namely, dia lasa na mihantahanta mandanjalanja ihany koa dia afaka ny ho sitrana toy ny nivoaka. Na dia izany aza, mba hahita ny sehatra toy izany 180 na latsaka, ny zava-misy dia tena lehibe.
Ankoatra izany, ao amin'ny angon-drakitra robo, ianao dia afaka mahita ny pachinko mitahiry ny tahirin-kevitra iray manontolo. Raha hotetehina ny fandraisana ho mpikambana, na manana tsipika mafy dia fanahy hijoro latabatra an-jorony sy ny faladiany mety slump Tabilao, toy izany mijanona amin'ny nosy iray akaiky ny fidirana, maro toy izany, mety ho hisambotra koa ny raharaham-barotra ny fahazarana ianao.
Voalohany indrindra, manapa-kevitra ny modely tianao namely, payout akaikin'ny mahitsy tsipika mijoro ihany no tetezamita kisary mety ho na, mifidy ny latabatra matetika mba hitoetra ambony noho ny eo ho eo ny andalana, kosa, dia mafy itoeran'ny slump kisary avy amin'ny, dia azonao atao ny mifanaraka hisafidy ny ambany latabatra ihany no afaka mijoro mety.
dia apetraka eo amin'ny lalao Board, ao izany no toetry ny tahirin-kevitra ihany hanoherana tsy pachinko fivarotana, dia mety tsy ho avy ny trapezoidal mety. Ao amin'ny
izao, satria misy ihany koa ny angon-drakitra manohitra izay haneho ny isan'ny revolisiona, ao amin'ny kajy fomba nampidirina teo aloha, azafady ataovy ny kajy ny tenanao. Noho ny an-jambany mamely koa, ilay olona namely mba hijerena ny mety, zavatra izay afaka handresy bebe kokoa. , Fanteno ny latabatra matetika ny hitoetra ambony noho ny eo ho eo ny andalana, tamin'ity indray mitoraka ity, anao amin'ny slump kisary ny hijoro mafy, dia mety ho lalao hifidy ny ambany latabatra dia mety haharitra ihany no mety.
izao, satria misy ihany koa ny angon-drakitra manohitra izay haneho ny isan'ny revolisiona, ao amin'ny kajy fomba nampidirina teo aloha, azafady ataovy ny kajy ny tenanao. Noho ny an-jambany mamely koa, ilay olona namely mba hijerena ny mety, zavatra izay afaka handresy bebe kokoa.